Oh m, a ụtọ nta game enwetatụbeghị kama akpali n'oge na-adịbeghị! Gịnị obi ọjọọ n'obi ime Eze Mmepe na na-echere ihe ndị a ogbenye nzukọ anu ulo esote? Ọkwa 59 bụ ihe dị ọcha na-achọ larịị, anu ulo n'ezie na-a ezumike na onye a dị ka gị ebumnobi bụ ikpochapụ 85% nke blocks na irite 15 000 ihe, ihe bụ ihe na ị na-ekwu? ada mfe…yeah ya mfe…mfe toughest larịị ma!
Ya mere, ihe na-eme anyị na-eme? ọma ndị doro anya ihe bụ na-ọ bụla ounce chioma i nwere ike afanyekwa nke onye ọ bụla mgbalị na-agba ọsọ na ya! Ị kwesịrị chọrọ ike nnukwu n'ịgwa, na mgbe a na-ada mma ma dị mfe nke bụ eziokwu bụ na ị na-agaghị na-nyere nnukwu n'ịgwa. N'ezie ego nke n'ịgwa e nyere gị na niile bụ ezigbo ndiọi. Ọ bụla mgbalị m mere (na nwa e nwere ọtụtụ ndị!) mgbe rụpụtara na otu firecracker na-emepụta, nnọọ na-akụda!
Ma, ọ bụ na o kwere omume afterall, nnọọ na ị ga na-atụ anya ebe gị blocks ga-ada ma jiri nlezianya na-eme atụmatụ gị agha otú a. One nnọọ handy tip is that you can make combinations above diamonds before they smash. Ya mere ọ bụrụ na ị nkenke ịhụ a Nchikota na-ga-abụ nanị ruo mgbe diamond si igbe na-egbujisịkwa na ọ akụrisị ala mgbe ahụ niile na-esi kụrụ ya n'ihu a na-eme.
Gbalịa na chepụta ihe arụ ọrụ kasị mma n'ihi na ị, Ụfọdụ egwuregwu na m ji bịa nso na-arụ ọrụ si n'elu ala na ndị ọzọ wee ngwa ngwa na ala elu, ma isi bụ otú ị iji anya nke uche kacha…oh na otú m banyere chioma? (*oh na nke ị nwere di na nwunye nke mapụtara boosters fọdụrụ si freebies na e nye gị ná mmalite a pụrụ nnọọ ịbụ larịị ịgbawa ha si na!)
Ndị kasị akụda mmụọ banyere ihe a larịị bụ na ọ na anya otú mfe! i nwere ike mkpa ịdabere n'elu blocks isonyere elu ozugbo ha see ala, na eziokwu nke a gosiri na a nnọọ oké ọnụ ahịa akụkụ nke m ihe ịga nke ọma! ~ Jisie!